I-Bella Vista, iimbono ezintle zeentaba zokulala 8
Iimbono ezinomtsalane zeentaba zeSibillini kunye neGran Sasso, indawo ekude; ukubaleka ngokwenene! Awukwazi ukuzibamba xa ufika; thatha iimbono ezintle ezingama-360! Jabulela umoya omtsha kwaye mhlawumbi iglasi yeprosecco! Okanye iVerdicchio yendawo.
Kwiinduli zeSibillini kufutshane nedolophu yembali yaseAscoli Piceno, kwindlela yegrabile phakathi kweelali ezimbini. Ekuqaleni indawo yokuhlala yasefama encinci, ibuyiselwe kumgangatho ophezulu. Iphelele kwiiholide; ukuphumla, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukupeyinta, ukuzingela iitruffles & nePorcini.
Indlu inamanqanaba amabini, umgangatho ophantsi unamagumbi amabini angamawele, indawo yokusebenzela, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle elinomlilo ovuthayo, iingcango zepatio kunye negadi. Umgangatho wokuqala unemigangatho eyenziwe ngomthi wom-oki, amagumbi amabini okulala amabini; I-master suite inegumbi lokuhlambela elikwi-suite, elinye igumbi eliphindwe kabini linegumbi lokuhlambela elikufuphi, kwakhona kumgangatho wokuqala ligumbi lokuhlala, elinomlilo ovuthayo kunye nokufikelela kwibalcony.
Uluhlu lweeNtaba zeSibillini lunokubonelela abathandi bendalo, abahambahambayo kunye neeramblers, kwaye ngenxa yembonakalo entle, ibetha wonke umbindi we-Italiya izandla ezantsi. Iindlela ziyaqhuba kwaye ziseyintlango ngoko kulula ukuzijonga. Eyona ncopho iphakamileyo yiMonte Vettore, ngaphezu kwe-8,000 yeenyawo ukuphakama. Lo mmandla wongelwe njengePaki yeSizwe ukuze iintyatyambo zasendle kunye nezilwanyana zasendle apha zikhuselwe. (I-villa yethu ingaphandle nje kwePaki yeSizwe yaseSibillini) Ukuba ibhere yaseYurophu, ingcuka okanye ikati yasendle, kunzima ukuyibona (kodwa ayinakwenzeka), lumka i-polecat, i-stoat, i-weasel, ihagu zasendle, i-porcupine, ukhozi lwegolide, i-goshawk kunye i-Sparrowhawk, inqabile kwaye zonke zibalwa phakathi kweentlobo ezininzi zezilwanyana zasendle ezirekhodwe ngabahambi.
Ingaphoswanga kwaye ithobeke, iMarche yamkela undwendwe kuyo yonke into enayo ngobuninzi ~ yiza uzifumanele yona.
COMUNANZA (malunga nemizuzu eyi-10 ngemoto)
Idolophu encinci ayibakhenkethi kwaphela, uya kufumana iivenkile ezinkulu zaseTeigre kunye neConrad apha ukuze uzigcine, ukuba uziva unomdla wokujonga iivenkile zalapha ekhaya.
AMANDOLA (malunga nemizuzu engama-20)
I-ASCOLI PICENO sesona sixeko sikufutshane ukutyelela; (malunga nemizuzu engama-40 emotweni)
Idolophu ekhohlisayo ye-Ascoli Piceno liziko eliphambili laseMarche kwaye, njengoko incwadana yabakhenkethi isitsho, yindawo onokuyibona ngosuku kodwa ungaze uyilibale. Kunye nesikwere sayo esikhulu esiphefumlayo, inezinye izinto ezibalaseleyo ezikwaziyo ukushiya uphawu lwazo nakweyona blasé yabakhenkethi.
Asizukubakho ngexesha lokuhlala kwakho kodwa uAlessandro noDori bakufutshane kwaye baya kufumaneka ukukunceda ukuba uyafuneka.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$342